कुन बार कुन देवताको ब्रत बस्ने ? थाहा पाई राख्नुहोस
हप्ताको हरेक दिन कुनै न कुनै भगवान्लाई समर्पित गरिएको हुन्छ । प्रत्येक दिन कुनै न कुनै भगवानको पूजा गर्ने गरिन्छ यस्तै हप्ताको हरेक दिन कुन भगवानको ब्रत बस्ने भनेर पनि छुट्टाईएको छ । प्रत्येक विशेष दिनमा उपवास सम्बन्धी फाईदाहरू पनि अद्वितीय रहेका छन् । धार्मिक शास्त्र अनुसार यस्तो रहेको छ बार अनुसार भगवानको ब्रत:
हिन्दु धर्म अनुसार यस दिन सूर्य देवको ब्रत बसिने गरिन्छ । ब्रतालुहरूले एक छाक अलिनो (नुन नभएको) खाना खाएर उदाउदै गरेको सुर्यलाई पूजा गरेर ब्रतको आरम्भ गर्ने गर्दछन् । साथै सुर्य देवलाई प्रसन्न गर्नको लागी रातो वस्त्रको प्रयोग निकै लाभ दायी मानिएको छ । साथै पूजामा रातो फूल राख्नु पर्दछ ।
के तपाईलाई छिटो–छिटो पिसाब लाग्छ ? यस्ता छन् १० कारण
के कारणले जन्मिन्छन जुम्ल्याहा बच्चा ? यस्ता छन् जन्मनुका कारणहरु !